Bhizinesi Atomization | Ehupfumi Zvemari
Susana Maria Urbano Mateos | | General hupfumi, Noticias
Imwe yematemu anga achinyatso kuongororwa mumakore apfuura aya anonzi "Bhizinesi Atomization". Asi isu tinorevei kana tichitaura nezve bhizinesi atomization? Kunyangwe isu tiri ve SME kana Micro-SME, kana isu tiri chikamu chekambani hombe iri kutsvaga nzira nyowani dzekuzvimisikidza, zvakakosha kuti titore iyi dudziro tichifunga nekuti inogona kuve yakakosha pakubudirira kana kukundikana kwekambani yedu.
1 Iyo atomization mumakambani.
2 Atomization yemusika
3 Makwikwi akakwana
4 Izvi zvinokanganisa sei bhizinesi rangu?
5 Atomization mukushambadzira
6 Chikamu cheumwe neumwe
7 Nzira dzekushandisa kushambadzira atomization.
8 Atomization mu e-commerce
Iyo atomization mumakambani.
Izwi pacharo rinoreva iyo kupatsanurwa kweizere kuita zvidimbu zvidiki. Mune nyaya dzebhizinesi, iyo kuparara kwechinhu ese maviri macececonomic uye macroeconomic ekunzwisisa kuri nani kwedu bhizinesi mamiriro. Izwi iri rinowanzo kuwanikwa munzvimbo mbiri huru: Iyo macroeconomic hupfumi uye kushambadzira.
Panyaya yezvehupfumi, tinogona kuwana iyo tsananguro yeAtomization mukati mechikamu che dzidziso dzehunhu hwemusika. Atomization yave iri iyo kupatsanurwa kwekugoverwa uye kudiwa mune vazhinji uye vashoma kwazvo vanopa uye vanokumbira. Iyo zvakare inowanzo kutaurwa pasi pezita re "Atomization yemusika"
Kunyangwe izwi iri richiita senge rakajeka uye rinovhiringidza, iyo atomization yemusika iri nyore chaizvo kutsanangura. Pfungwa iyi inoreva mamiriro ekutengeserana umo akasiyana vatengi nevatengesi anoita kuti kusaenzana kwawo kusakwanisika. Sezvinei, musika une atomized apo pane nhamba huru ye vatengi vadiki nevatengesi mune iyo hapana inogara munzvimbo isingafadzi, ichibvumira kuti musika urambe wakaenzana.
Iwe unonyatso kuziva chii mesoeconomics?
Bhizinesi atomization izwi rinobva kune akasiyana mafomati emakwikwi. Classical economists vakapokana kuti iyo free competition yakashanda sesimba rekuraira rakakwanisa kusimudzira iyo Kuderedza mutengo yekambani kugona wedzera kana chengetedza chikamu chako chemusika. Zvichienderana neiyi scoop, dzidziso dzakabuda dzakarongedza mamiriro akasiyana umo makwikwi angave akarongwa zvichienderana nenhamba yevatori vechikamu vakapinda mairi.
La kukwikwidza kwakakwana Izvo zvakazotsanangurwa seimwe umo nhamba huru yevatengesi inokwanisa kupa zvigadzirwa zvavo, zvinopesana nemaoligopoly masisitimu uko kunowanikwa chete vashoma vevatengesi, kana kutombova monopolies uko makwikwi asipo nekuti musika iwo unodzorwa ne mugadziri mumwe chete.
Tichifunga nezvehurongwa mune makwikwi akasiyana, isu tinoziva izvo izvo atomization chinhu chakakosha pakudzidza uye kutsunga kweizvi, uye pamwe chete nehukama, pachena uye kufamba kwemahara zvinoumba misika yemakwikwi akakwana.
Izvi zvinokonzerwa nekuti sezvo paine huwandu hwakanyanya hwevatengesi nevatengi, huwandu hunopihwa kana kudiwa nemumwe nemumwe wavo hunoita hudiki zvekuti hunhu hwavo hunokundikana kugadzira zvinonzwisisika pazvinhu zvinogadzirwa. mitengo yezvinhu. Mune idzi nzanga, mitengo ingori paramende, nekuti kana kambani ikabudirira wedzera kugadzirwa kwako uye huwandu hwekutengesa pasina izvi zvine mhedzisiro pamutengo iwe waunopa, ichave nehunhu hunodaidzwa mutengo unogamuchirika, sezvo ichizomanikidzwa kutengesa pamutengo uyo wakatsanangurwa sekugamuchirwa nevamwe vagadziri.
Izvi zvinokanganisa sei bhizinesi rangu?
Izvi zvinotungamira kune hapana anokwanisa tenga chigadzirwa nemutengo wakaderera uyo anotenga zvakasara, nepo vatengesi vachiona zvisingaiti kupa zvigadzirwa zvavo nemutengo wakakwirira kupfuura zvinoita vamwe, nekuti kana vakaedza vangadzingwe pamusika. Mune aya marudzi emisika hapana kupokana pakati pemakambani, asi asi a Kupararira kwekudzora nawo ayo akasiyana ehupfumi vamiririri vanogona kushandisa pane kufamba kwemusika.
Mukupedzisa, pa taura nezvehupfumi musika weatomized ndeimwe umo musina mutungamiri wezvekutengesa uyo anogona kutsanangura parameter mumusika, kana zvisiri vakwikwidzi vakawanda vanochengeta a yakadzikama uye inoenderera chinzvimbo, nemakwikwi chaiwo anobvisa kukosha kweumwe neumwe zvine chekuita nekupa uye kudiwa kwese.
Kune rimwe divi, kana tichitaura nezve bhizinesi atomization maererano nekushambadzira, isu tinogona kutsanangura bhizinesi atomization senzira yekushandisa chikamu chechikamu chinotarisa pamisika midiki, kunyangwe kusvika padanho rehumwe. mabvazuva mhando yekumisikidza ndeye kunongedzera iro boka revanhu vanotenga zvakasarudzika zvakanyanya uye pamwe zvinodhura zvigadzirwa kana masevhisi. Mune zvimwe zviitiko, munhu wega wega akapatsanurwa mukati memusika wavo wega. Iyo nzira dzekutengesa pamhepo ivo vanogadzira kutaurirana kwakanangana kunobatsira maitiro aya nekuita zvikamu zvidiki zvidiki uye zvidiki.
Chikamu cheumwe neumwe
Kutsanangura iyo atomized kushambadzira isu tinoda kutanga isu tinofanira kujekesa kuti zvinoreva chikamu chemusika. Musika unotsanangurwa se Boka revanhu vanogovana zvavanoda uye vane simba rakafanana rekutenga. Naizvozvo, a Segmented musika idiki-chikamu chemusika umo mune zvimwe zvinodikanwa zvinotsanangurwa.
Mazhinji makambani makuru ari kuita tarisa musika yose yekupa zvigadzirwa uye masevhisi anogona kutengwa nevanhu vakasiyana siyana vachishandisa mashoma chete zvikamu zvekushandisa yakafara zvakanyanya senge kugoverwa kwenzvimbo kana hunhu hwevatengi.
Mamwe makambani, kunyanya madiki, anotsvaga kusvika pamusika wakaderera zvakanyanya zvichibva pane zvavanofarira vanhu, mararamiro, uye zvavanofarira. Kana isu tikaenda zvakatowanda mukuita munhu tinowana ipapo mushamba niches iyo inosarudzika mune yakasarudzika zvido izvo imwe musika isingagovane nechero ipi. Pakupedzisira, iyo yekupedzisira degree rezvikamu Iko atomization mune iyo yega mutengi inorapwa neimwe nzira.
Nzira dzekushandisa kushambadzira atomization.
Kunyangwe ichiita kunge basa risingakwanisike kuita, iyo atomization kushambadzira kunogoneka chaizvo. Kunyangwe makambani mahombe auya gadzira nzira dzakabudirira dzekutengesa kushambadzira kwako. Isu tese tinoyeuka mushandirapamwe weCoca-Cola umo maisanganisira mazita nemazita pazvinyorwa zvaro, zvichikonzera vanhu vazhinji kuita nzendo refu kutsvaga mazita avo.
Coca-Cola yakawanikwa atomize kushambadzira kwako panguva yaakatanga kufona iyo yaakapa huwandu hwakati hwemakani ane zita rakasarudzwa nemutengi, achigadzira chigadzirwa chemunhu mumwe nemumwe.
Kushambadzira kwemaatomisheni Izvo zvinosanganisirawo kupa kwakaringana, kwoushamwari uye kutarisisa kwega kune mumwe nemumwe wevatengi vedu. Zvinogumbura uye kazhinji zvinotsamwisa kuti tifambe kuburikidza nemenu ine sarudzo dzokusarudza kubva patinoda kukumbira rubatsiro rwefoni.
Pane kupokana, kana isu tikawana iyo kutaurirana system umo mumwe munhu anotitambira nenzira yatinga taure navo pane zvatinoda chaizvo, tichawana rubatsiro rwakavimbika uye rwakananga nepo isu tichinzwa kuda kutenga chigadzirwa zvakare muchitoro ichocho.
Atomization mu e-commerce
La kugona atomize kushambadzira Yakawedzera nekukwira kwe e-commerce uye zvishandiso zvainopa. Izvo hazvidi kuti uve nenhamba yakakura yevashandi vanoita kutsvagisa musika uye kuwedzera mutengo wezano yekushambadzira kana isu tiine zvigadzirwa zvetekinoroji izvo zvinotibvumidza isu kuti tipe yakasarudzika uye pachedu kutarisisa kune mumwe nemumwe wedu vatengi
Social network tamba basa rakakosha mu atomization yekushambadzira Kuve dhatabhesi yemaprofiles kwatingawana kubva pazita kuenda kune zvido zvevatengi vedu. Nenzira iyi tinogona kuve nekutaurirana kwakasarudzika.
Mumwe muenzaniso watinowana iwo mashoko enyanzvi Zviri mumaemail atinogashira achitipa izvo chete zvatinoda uye kusanganisira zita redu pachedu kakawanda. Izvo hazvina kuitika, uye hapana mumwe ari kumashure kwekombuta achinyora yega yega maemail, kana zvisiri izvo kana isu tikanyoresa pane peji kuti tigamuchire zvinopihwa kana kunyange pasocial network, pane maitiro anoenderana nemaitiro edu anosarudza kuti chii chiri kuti isu tinonyanya kutenga.
Imwe fomu ye atomize kushambadzira kwekambani yedu iri kupa chigadzirwa ne chaiwo hunhu uye zvinodiwa inodikanwa nemutengi. Kunyangwe kuita izvi kuchizoratidza mutengo wekugadzira kwedu nenzira yakanaka, imari inogona kugadziriswa nekuona kuti, kazhinji, vatengi vari kuda kubhadhara mutengo wakakwira kuti vatore chete chigadzirwa chavanoda.
Kupedzisa, tinotsanangura kuti iyo atomization mukushambadzira ndeye yakasarudzika segmentation kana padyo padyo neyakajairirana munhu. Kunyangwe iyi iri zano rinodhura uye pakutanga rakaomarara kuita, inowanzo kuve inobatsira zvikuru nekutibvumidza kukwidza mitengo yezvigadzirwa kana masevhisi. Izvo zvava kuita nyore kuwana atomized kushambadzira nekuda kwenzanga dzemagariro uye zvimwe zvishandiso zvetekinoroji izvo zvinotibvumidza isu kuti tizive nekudyidzana pachedu nevatengi vedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Bhizinesi Atomization
Iwe unoda kuisa mari mukusagadzikana here? Saina kune akati wandei mazano
Ndedzipi nzira dzaungashandisa mukutarisana nezvikwereti?